Apple inobata kodzero dzekuuya Kubva kuApple TV + | Ndinobva mac
Ignacio Sala | 04/05/2021 16:00 | Apple TV, Noticias
Mazhinji mafirimu uye akateedzana anosvika ese maApple TV + uye mamwe masevhisi evhidhiyo kunobva mukugadziriswa kwebhuku uye / kana fungidziro yevanyori. Chibvumirano chazvino chakasvitswa naApple kugadzira zvinyorwa zvepakutanga zvinogona kuwanikwa muchinyorwa Deadline.
Sekureva kwesvikiro iri, Apple yakawana kodzero yekugadziriswa kwemufirimu weBroadway mimhanzi Huya Kubva Kunze. Uyu mutambo, uyo akahwina mubairo weTony (The Oscars of the theatre), inotungamirwa naChristopher Ashley uye inotaura nyaya yechokwadi yezviuru zvevafambi vakabatwa mutaundi diki muNewfoundland
Ashley akagashira iyo Tony Mubairo wekutungamira kwemimhanzi Bva Kubva Kure. Zvakare akasarudzwa kuti choreography. Mutambo wakanyorwa naTony Olivier vanohwina mubairo Irene Sankoff naDavid Hein.
Jennifer Todd naBill Condon vanogadzira padivi peiyo vagadziri vepakutanga vebasa, Junkyard Imbwa Zvigadzirwa, pamwe naMark Gordon. Brittany Hapner achashanda semubatanidzwa-mugadziri. Laurel Thomson achashanda semugadziri mukuru weeOne.
Alchemy Production boka richava pamusoro pe kugadzirwa kwedenga uye kutungamira kwese. RadicalMedia (Hamilton, David Byrne weAmerican Utopia) achabata zvinyorwa.
Kugadzirwa kweiyi firimu nyowani ichatanga muna Chivabvu muNew York City uye ichave nevashandi vanopfuura mazana maviri. Iyi firimu ichave neyakagadzirwa yekugadzirwa kweBroadway play, kunyangwe ichawedzera iyo cast kuitira kuti iite iko kuchinjika. Kuratidzwa kwe Huya Kubva Kunze yakarongerwa kupera kwegore rino paApple TV +.
Huya Kubva Kunze yaive pamutemo munyika zhinji pakauya chirwere checoronavirus, saka dai wanga wafunga kuenda kuimba yemitambo panguva iyoyo, unogona kumirira kuti uone mhedzisiro paApple TV + painotanga. Iyi ndiyo yekutanga Broadway inogadzira kupera paApple TV + uye pamwe haizove ekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inobata kodzero dzekuuya Kubva kuApple TV +
Sevha maeuro zana pakutenga yako 100-inch 27K iMac